Bangiyada waaweyn oo soo bandhigay natiijooyinkii faa’iidooyin ay heleen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Afarta bangi oo Iswiidhen ugu waaweyn. Sawirle: Scanpix
Bangiyada waaweyn oo soo bandhigay natiijooyinkii faa’iidooyin ay heleen
La daabacay onsdag 17 juli 2013 kl 14.09
Dhammaan afarta bangi ee dalka waxay hadda soo gudbiyeen warbixinahoodii sannadka, kuwaas ay ka muuqato in ay bangiyadaasi faa’iidooyin balaayiin ah samaynayaan.
Shalay waxaa natiijo ay faa’iido weyn ka muuqato soo gudbiyey bangiga SEB, taas sannadkaan saddexdii bilood oo ugu horreeyey gaartay 4,8 bilyan oo karoon.
Bangiga Swedbank ayaa isaguna soo bandhigay faa’iidadii saddexdii bilood oo sannadka ugu horreysey oo gaareysa 4,4 bilyan oo karoon, oo u dhiganta koror boqolkiiba 3 ah marka la barbardhigo natiijadii sannadkii hore. Laakiin natiijadu waxay 200 oo milyan oo karoon ka yarayd intii la filayey.
Bangiga Handelsbanken ayaa isna soo bandhigay natiijadii naa’iidada u helay saddexdii bilood oo sannadkaan ugu horreysey oo gaaeysa 4 723 milyan oo karoon. Waana natiijo ka badan natiijadii sannadkii 2012 oo ahayd 4 413 milyan oo karoon.
Bangiga Nordea oo ah bangiga ugu weyn Waqooyiga Yurub wuxuu sannadkaan bilowgiisa sameeyey fa’iido gaareysa 9,1 bilyan oo akroon. Natiijadaas oo ka sarreysa natiijadii la saadaalinayey in bangigu gaaro.